Umthandazo woMntwana oNgcwele Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ukuba ufumanisa ukuba ufuna enye umthandazo womntwana ongcwele, ukwindawo elungileyo apha esiza kukubonisa yona. Ezi ndumiso kuMntwana oyiNgcwele uYesu siyabulela kwaye kwisicelo sakhe sokulunga.
1 Ibali lomntwana ongcwele kunye nomthandazo wakhe
2 Ukuzinikela koMntwana oNgcwele
3 Utata uJuan del Rizzo
4 Iingcebiso zokuthandaza ngokuchanekileyo kuMntwana oyiNgcwele uYesu
4.2 Khetha indawo efanelekileyo
4.3 Yiva imithandazo yakho njengoko uyivakalisa
6 Emva kwesikhalazo kuMntwana oNgcwele
Ibali lomntwana ongcwele kunye nomthandazo wakhe
Umthandazo kuMntwana oNgcwele awunawo umhla wokuwenza, nangona kunjalo, imihla kaDisemba lelona xesha lifanelekileyo, ukusukela oko kubhiyozelwa ukuzalwa kukaYesu.
Lo mntwana uvela kwiNtaba yeKarmele kwaSirayeli, olu hlobo lumangalisayo lusondele eNazarete. Umntwana oNgcwele wayehamba nabazali kunye nezihlobo zakhe; UJosé, uMaría kunye notatomkhulu wabo uSan Joaquín noSanta Ana, baya kule ndawo behamba bethandaza.
Uninzi lwenkolo eyayihlanganisene apho ukuthandaza yabonisa uthando olukhulu kuMntwana. Nje ukuba uMhlawuleli oNgcwele ahambele eZulwini, bonke abahlali beNtaba yeKarmele baqhubeka nokukhumbula uMntwana ngothando olukhulu nangokuzinikela. Ukufika kwamaKarmeli eYurophu, baqala uhambo lwabo ngezonqulo, bavakalisa ukuzinikela kwabo kuMntwana oyiNgcwele.
Kwiminyaka engamakhulu amathathu, ukholo kuMntwana onguYesu lukhule ngokukhawuleza kuwo onke amazwekazi afana neMelika, iAfrika, iAsia neYurophu. Abantu baqala ukuqonda ukuba xa becela ubabalo lukaThixo kwiimpawu ezintle zikaYesu, iintsikelelo ezinkulu ziyafumaneka.
Kwikona nganye kukho imizobo eyahlukeneyo kunye nemifanekiso emele uMntwana onguYesu apho kwenziwe khona imimangaliso eyaziwayo kwihlabathi liphela. Phakathi kwamanani awaziwayo esinawo: UYesu osana wasePrague, oku kubekwe eCzechoslovakia; uMntwana oyiNgcwele waseArenzano, e-Itali; Umntwana onguMangaliso onguYesu waseBogotá, efumaneka eColombia; iSanto Niño de Atocha eMexico, phakathi kwabanye.
Ukuzinikela koMntwana oNgcwele
Phakathi kwe-1200 kunye ne-1500, iSan Antonio de Padua kunye neSan Cajetán babemncoma kakhulu uMntwana oyiNgcwele uYesu; Kungenxa yoko le nto kukho imizobo emininzi apho iNgcwele nganye ithwala uMntwana oNgcwele zodwa.
Nangona kunjalo, abo bazukisa kakhulu ukuzinikela kuMntwana oNgcwele nguSanta Teresita del Niño Jesús kunye neSan Juan de la Cruz. Kwimeko kaSanta Teresa, kuthiwa wayedlula kwizinyuko ezazikhokelela kwipaseji ngequbuliso wabona uMntwana onguYesu, owambulisayo.
Ukusukela ngala mzuzu, uSanta Teresita wayehlala enomfanekiso oqingqiweyo woMntwana oNgcwele, kwaye kuwo onke amakhaya awayetyelele washiya umzobo woMntwana uYesu njengesipho esiza kuxhonywa siphakanyiswe.
Utata uJuan del Rizzo
Ngo-1935, uBawo waseSales uJuan Rizzo wafika eBogotá kwindawo eyayingenabemi nelilibalekileyo ngelo xesha. Ukusetyenziswa komfanekiso woMntwana wasePrague kuthintelwe ukusukela oko umbutho wamcela ilungelo lokusebenzisa lo mfanekiso. Ewe, kubawo u-Rizzo, uThixo angavuya kakhulu ukuba ubuntwana bukaYesu buhlonitshwe, njengoko bekubonisiwe kwimimangaliso emininzi.
Ubawo uRizzo wayehlala ekhumbula: "Buza yonke into ofuna ukuyibuza malunga nobuntwana bam kwaye akukho nto iyakuphikwa ukuba kufanelekile ukuba uyifumane." Ke akazange adinwe kukwenza ukuzinikela kwakhe kuMntwana oNgcwele, ngoko ke wagqiba kwelokuba afumane umfanekiso omtsha. Ngaphambi kokuba uqhubeke, unokuba nomdla wokwazi i- Umthandazo ku Yesu oselusana.
Iingcebiso zokuthandaza ngokuchanekileyo kuMntwana oyiNgcwele uYesu
USanta Teresa wasifundisa ukuba ukuzimisela yeyona nto iphambili xa sithandaza, oko kukuthi, ukuba sifuna ukukhula kule ndlela, asinakuvumela ukudimazeka kusihlasele; Ukuba akufuneki siphikelele nangona izicelo zethu zingazalisekiswanga, kufuneka silandele ubizo lokholo.
Kananjalo, umjikelo wemithandazo kufuneka uzalisekiswe kule leta, kwimeko yomthandazo oya kuMntwana oNgcwele kufuneka wenziwe iintsuku ezintathu zilandelelana kwaye ukhatshwe nguBawo Wethu Osezulwini, Yibonge uMariya noZuko. yenza ngokungathi ayithathwa njengengaphelelanga.
Kuya kufuneka ukhethe indawo ekuvumela ukuba ufumane uxolo lwangaphakathi, apho kungekho ngxolo okanye misebenzi iphazamisa umthandazo. KwiVangeli ngokukaMateyu oNgcwele Isahluko 6, iVesi 6 «Xa uqala ukuthandaza, ngena egumbini lakho, uvale umnyango uthandaze kuYihlo osemfihlekweni. Aze uYihlo obona emfihlekweni akubuyisele ekuhleni.
Yiva imithandazo yakho njengoko uyivakalisa
Akwanelanga ukwenza umthandazo ogqibeleleyo kuMntwana oNgcwele okanye ukuba kwindawo ethe cwaka, ukuba asizenzi ngokwethu zonke izinto esizithethayo ngomthandazo ebomini bethu, akukho nanye esebenzayo. Ngayo yonke le nto sinako ukwenza ubomi bethu bube lula.
«Umntwana ongcwele uYesu, umnini wentliziyo yam nobomi bam,
Umntwana wam onethenda kunye nothandwayo. Ndiza kuwe ndizele lithemba,
Ndiza kuwe ndicela inceba yakho. Ndifuna ukukubuza malunga nezinto ezininzi. Ukuba ubathululele abathembekileyo bakho, ezo izandla zakho zivulekileyo zisasaza ngothando kunye nesisa.
Mntwana othandekayo, Msindisi osikelelekileyo, hlala kunye nam ukuze undihlukanise nobubi kwaye undenze ndifane nawe, undenza ndikhule ebulumkweni nasebubeleni phambi koThixo nabantu.
Owu mntwana omncinci uYesu, ndiya kuhlala ndikuthanda ngomphefumlo wam wonke! Umntwana ongcwele uYesu, sisikelele; Umntwana ongcwele uYesu, simamele; Umntwana ongcwele uYesu, sincede.
Mntwana olungileyo wobomi bam, intuthuzelo yomkristu, ubabalo endiludinga kakhulu kwaye olundenza ndiphelelwe lithemba kwaye ndonganyelwe, olundenza ndizive ndingonwabanga ebomini bam ndibeka ezandleni zakho ezisikelelweyo: (Buza ngokholo olukhulu ukuba ufuna ntoni ukufezekisa).
Emva kwesikhalazo kuMntwana oNgcwele
«Wena uyalwazi usizi lwam, kuba ndibeka yonke into kuwe, unike uxolo kwababuhlungu kwaye unike isiqabu kwintliziyo yam.
Kwaye nangona ndingakulungelanga uthando lwakho, andizukujika ndize kuwe, ngokuba ungumntwana kaThixo noncedo lwamaKrestu.
Khumbula, Owu Mntwana oyiNgcwele othandekayo, ongazange weva kusithiwa, ukuba umntu othile ubongoze phambi kwakho ngaphandle koncedo lwakho ukuba amkele, ngenxa yesi sizathu, ngokulula nangokuthembela, ngokuzithoba nokuguquka, ezele luthando nethemba, eyazi imimangaliso uyasebenza kwaye yintoni ngokukhawuleza oyinikezelayo, ngoncedo olu luvo ndikubuza lona: (Buza ngokholo olukhulu ukuba ufuna ukufezekisa ntoni).
Umntwana ongcwele uYesu, sisikelele; Umntwana ongcwele uYesu, simamele; Umntwana ongcwele uYesu, sithuthuzele; Umntwana ongcwele uYesu, sincede; Umntwana ongcwele uYesu, sikhusele; Yesu ongumntwana kaThixo, sikhusele; Ungumntwana ongcwele uYesu, sithembele kuwe.
Emva kokuba kwenziwe umthandazo kuMntwana oNgcwele, iCreed, uBawo Wethu, Yibani noMariya noZuko kufuneka kuthandazwe iintsuku ezintathu zilandelelana.